Petkit Pura X, igbe mkpofu maka pusi gị nke nwere ọgụgụ isi ma na-asachapụ onwe ya | Ozi gadget
Petkit Pura X, igbe maka nwamba gị nwere ọgụgụ isi ma na-asachapụ onwe ya
Ọ bụrụ na ị nwere pusi, ị maara na igbe mkpofu nwere ike ịghọ ezigbo nro, ọ bụrụ na ị nwere abụọ ma ọ bụ karịa, agaghị m agwa gị ihe ọ bụla. Agbanyeghị, ị maralarị na na Actualidad Gadget anyị na-enwe usoro ọzọ ejikọtara ọnụ mgbe niile iji mee ka ndụ dịrị gị mfe yana n'ezie maka anụ ụlọ ị hụrụ n'anya.
Anyị na-eleba anya na Petkit Pura X ọhụrụ, igbe nwere ọgụgụ isi na-asachapụ onwe ya ma nwee ọtụtụ atụmatụ dị ịtụnanya. Chọpụta na anyị ka ị ga-esi kwuo nke ọma na ọrụ na-agwụ ike nke ihicha igbe igbe kitty gị, ị ga-enwe ekele maka ya, ị ga-enweta ahụike na n'ezie na oge.
2 Ọrụ isi
3 Ntọala na ụzọ ị ga-esi na-emekọrịta ihe na igbe ájá
Anyị na-eche nnukwu ngwugwu ihu, kama m ga-ekwu nnukwu. N'ebe dị anya site na ihe ị nwere ike iche n'echiche ịbụ igbe ájá, akụkụ ya dị nnọọ ukwuu, anyị nwere ngwaahịa na-atụ 646x504x532 millimeters, ya bụ, ihe dị ka igwe na-asa ákwà, ya mere anyị agaghị enwe ike idobe ya kpọmkwem n'akụkụ ọ bụla.. Otú ọ dị, imewe ya na-esonyere ya, a na-ewu ya na plastik ABS maka mpụta ọcha, ma e wezụga ebe dị ala, nke dị na isi awọ, ebe nkwụnye stool ga-adị.
Isi na-ewepụ mmiri mmiri
ngwugwu akpa mkpofu
N'elu anyị nwere mkpuchi dị ntakịrị concave ebe anyị nwere ike ịhapụ ihe ndị dị na ya, n'ihu obere ihuenyo LED nke ga-egosi anyị ozi, yana naanị bọtịnụ mmekọrịta abụọ. Tụkwasị na nke ahụ, ngwugwu ahụ na-agụnye obere ihe nkedo nke ga-enye anyị ohere ịnakọta ihe ndị nwere ike ịchọta ájá nke pusi nwere ike wepụ, ihe nwere ekele dị ukwuu. Ngụkọta arọ nke ngwaahịa a bụ 4,5Kg ya mere ọ bụghị oke ọkụ. Anyị nwere njedebe dị mma na nhazi na-adọrọ mmasị, nke na-ele anya nke ọma ọbụna n'ime ụlọ ọ bụla, n'ihi na dịka anyị ga-ahụ n'okpuru ebe a, ogbugbu ya dị mma nke na anyị agaghị enwe nsogbu na nke ahụ.
Igbe a na-awụba n'oké osimiri nwere usoro ihicha nke dabeere, ma ọ bụrụ na anyị na-ahụ n'ime ya, na a drum (ebe a-awụba n'oké osimiri ga-adị na ebe ọ ga-ebelata onwe ya). Sistemụ nhicha dị mgbagwoju anya, yabụ na anyị agaghị ebi na nkọwa teknụzụ na injinia, kama na nsonaazụ ikpeazụ nke Petkit Pura X na-enye anyị, na na ngalaba a, anyị nwere obi ụtọ na ule ndị a rụrụ.
Anyị ekwesịghị ichegbu onwe anyị banyere eziokwu na ọ nwere a n'ibu ọrụ, ebe ọ bụ na sandbox nwere akpaka ihicha usoro na anyị ga-edozi site na ngwa, Otú ọ dị, o nwere dị iche iche sensọ, ma ibu na ije, nke ga-egbochi Pura Petkit X na-aga. n'ime ọrụ ma jakị dị nso ma ọ bụ n'ime. N'akụkụ a, nchekwa na ịdị jụụ nke obere feline anyị nwere ntụkwasị obi zuru oke.
Dayameta ntinye Jack: 22 centimeters
Ibu ngwaọrụ dabara adaba: N'etiti 1,5 na 8 Kilogram
Ike aja kacha elu: N'etiti 5L na 7L
Sistemụ Njikọta: 2,4GHz WiFi na Bluetooth
Ekwesiri iburu n'uche na ngwugwu na-agụnye usoro ngwa ngwa, ndị a bụ mkpọ anọ nke mmiri na-ekpochapụ isi ísì, yana ngwugwu akpa iji kpokọta unyi. Ọ bụ ezie na akpa stool nwere nha pụrụ iche, echeghị m na enwere nnukwu nsogbu iji ụdị obere akpa ọ bụla, Otú ọ dị, anyị nwere ike. ịzụta akpa na mkpochapụ isi iche iche maka ọnụahịa ezi afọ ojuju na weebụsaịtị Petkit. N'ezie, ngwa ndị a dịkwa na PETKIT PURA X - mapụtara....
Banyere ngwa ngwa, n'ozuzu àgwà nke ngwaọrụ na ndị ọzọ mgbagwoju anya nke Petkit Pura X, anyị nwere nnọọ afọ ojuju, anyị ga-ugbu a ga-enyefe a dum ngalaba ma ngwa na dị iche iche mmemme usoro. na smart sandbox. ntọala.
Ntọala na ụzọ ị ga-esi na-emekọrịta ihe na igbe ájá
Iji hazie ya, naanị anyị ga-ebudata ngwa ahụ Petkit dị maka abụọ ahụ android dika iOS kpam kpam n'efu. Ozugbo anyị dechara nhazi na ndebanye aha nke ngwa ahụ, anyị ga-abanye iji tinye ngwaọrụ a na ajụjụ, a ga-agwa anyị ka anyị soro ntuziaka ụfọdụ na bọtịnụ Pura X, Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, anyị Ị nwere ike ịhụ vidiyo anyị bugoro na ọwa YouTube anyị na-enyocha Pura X ebe anyị na-egosi gị usoro nhazi usoro site na nzọụkwụ.
Ngwa ahụ na-enye anyị ohere idobe ndekọ zuru ezu nke oge anụ ụlọ anyị na-aga na igbe ájá, yana usoro nhicha ha, ma akpaka na akwụkwọ ntuziaka. Na anyị nwere ike gbanyụọ ya, na-aga n'ihu ozugbo ihicha na ọbụna hazie ihe ozugbo wepụ isi. N'ihi na ndị ọzọ nke mkpebi siri ike anyị nwere ike mepụta «Smart Adjustment» dịkwa na ngwa. Na mgbakwunye, na ndekọ a, anyị ga-enwe ike ịhụ ọdịiche dị na ibu nke pusi anyị.
A ga-egosipụta oke nwamba a ozugbo na ihuenyo nke X dị ọcha, Nke a na-enye anyị ozi gbasara ọnọdụ nke ájá, iji mee ka anyị mara mgbe anyị ga-agbanwe ya, n'otu aka ahụ na omume niile nke ngwa nyere nwekwara ike iji aka mee ozugbo site na naanị bọtịnụ anụ ahụ abụọ nke Petkit Pura X mejupụtara.
Obi abụọ adịghị ya, nke a dị ka ngwaahịa na-adọrọ mmasị nke ukwuu, ị nwere ike ịzụta ya na Powerplanet Online dị ka onye na-ekesa ngwaahịa a na Spain, ma ọ bụ site na usoro mbubata sitere na webụsaịtị ndị ọzọ. Obi abụọ adịghị ya, ọ bụ ihe ọzọ dị oke ọnụ, gburugburu 499 euro dabere na ebe a na-ere ere, Ma karịsịa ma ọ bụrụ na anyị nwere ihe karịrị otu nwamba, ọ pụrụ ịzọpụta anyị oge dị ukwuu, na-enyere anyị aka ịnọgide na-adị ọcha nke nwamba ma nke ụlọ anyị, ka o wee bụrụ ihe jikọrọ anyị na ndụ kwa ụbọchị. . Anyị enyochala ya, anyị agwala gị ahụmahụ anyị n'ime omimi ma ugbu a ọ dịịrị gị ikpebi ma ọ bara uru ma ọ bụ na ọ bụghị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Petkit Pura X, igbe maka nwamba gị nwere ọgụgụ isi ma na-asachapụ onwe ya
Nlebanya dị oke mma! Daalụ nke ukwuu!!!! Achọrọ m ya!
Ntụle ekwentị: Doogee V10 vs Doogee V20